Marihana fa ity fitondrana ity dia nampanantenaina izany. Raha ny marina, mifanohitra amin’izany no zava-misy. Mitazona fahefana ho azy irery. Raha tokony ho niroso tamin’ny fifidianana isam-paritra dia naleon’ny fitondrana foibe nanendry governora hasolo an’ireo lehiben’ny faritra. Araka ny lalàmpanorenana izay nolaniana nandritra ny tetezamita, izany hoe nandritra ny fitondran-dRajoelina dia tsy maintsy olom-boafidy ireo governora. Saingy amin’izao, lavitry ny afo ny kitay raha ny fitsinjaram-pahefana no hasian-teny. Hatramin’izay, tsy nisy mpitondra sahy nampihatra io rafi-pitantanana io teto amintsika. Niresaka azy fotsiny ireo fitondrana nifanesy. Ka hanao ahoana ity taona 2020 ity ? Tsy mirona amin’izany ny fitondrana ankehitriny na dia mitaky ny fitantanana ny CLD azy ireo depiote. Ireto farany rahateo dia manafangaro hatrany ny asany sy amin’ny asan’ny mpanatanteraka.